नेपाल राष्ट्र बैंकमा पास भएका को–कसले नियुक्ति पाए ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदमा भएको अन्तिम परीक्षामा पास भएकाहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । को–को सिफारिसमा परे ? थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
नयाँ जहाज थप्दै बजार हिस्सा गुमाउँदै नेपाल वायुसेवा निगम
काठमाडौं । गन्तव्य विस्तार तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाको अभावले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । नयाँ जहाज खरीद गरेबापत अधिक कर्जा दायित्वले वित्तीय जोखिममा परेको..
नेपाल वायुसेवा निगममा पास भएका को–कसले नियुक्ति पाए ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमको विभिन्न पदमा भएको परीक्षामा पास भएकाहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । को–को सिफारिसमा परे? थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
Results 845: You are at page 11 of 29